Friday with MYSTERYTELLER Archives - Kavyalaya - काव्यालय
Friday with MYSTERYTELLER
by रितेश २३ साउन २०७७
२३ साउन २०७७0comment
by रितेश ९ साउन २०७७
“भन्नुस्, तपाईंको समस्या के हो ?” प्रहरीको मोटो आवाज निस्किन्छ । “मेरी छोरी हराइन्,” मेरो मसिनो ( रुन्चे ) आवाज निस्किन्छ । “कहाँबाट ?” आवाज सामान्य सुनिन्छ । सायद उनीहरुलाई…
Friday with MYSTERYTELLERमीमांसासिनेमा
CRACKING the DARK
by रितेश २६ असार २०७७
…म सुरुबाट सुरु गर्छु है !… “STEPHEN KING”को किताबमा आधार भएर बनेका दुई फिल्म- “STAND BY ME” र “IT”बाट प्रभावित भएर NETFLIX ले बनायो-“STRANGER THINGS”. सिरिज राम्रो बनेको छ ।…
by रितेश ३० जेष्ठ २०७७
“खाना बनाउने आज कसको पालो ?” बुबाले सोध्नुभयो । सबैका नजरले मलाई निसाना बनाए । सबै गललल्ल हाँसे । “के म दाइलाई खाना बनाउन सहयोग गर्न सक्छु ?” बहिनीले उठ्दै…
by रितेश १६ जेष्ठ २०७७
Friday with MYSTERYTELLERसंस्मरण
by रितेश २ जेष्ठ २०७७
अहिले म र समय दुबै फुर्सदमा छौँ । मनमा अनेक थरीका भावनाहरुको आना-जाना भइरहेका छन् । मस्तिष्कमा तर्कहरुको लर्को लागिरहेका छन् । मलाई मन समयझैं लाग्छ, परिवर्तन भइरहने । मलाई मस्तिष्क संग्रहालयझैं लाग्छ,…
by रितेश १९ बैशाख २०७७
by रितेश ५ बैशाख २०७७
लकडाउन समय । वातावरण चारैतिर शान्त छ । होइन, होइन जताततै भाइरसको आतंक फैलिरहेको बेला वायुमण्डल कसरी शान्त रहन सक्छ ? मन कसरी क्लान्त नहुन सक्छ ? शान्त होइन अशान्त…